जमरा कसरी राख्ने ? यस्तो छ घटस्थापनाको शुभ साइत र शास्त्रीय विधान - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
जमरा कसरी राख्ने ? यस्तो छ घटस्थापनाको शुभ साइत र शास्त्रीय विधान
प्रकाशित मिति: २३ आश्विन २०७५, मंगलवार October 10, 2018
काठमाडौं । असोज २४ गते भोलिदेखि नवरात्र आरम्भ हुँदैछ । नवरथामा नौ दिनसम्म दूर्गा भवानीको पूजा उपासना गरिन्छ । हिन्दू धर्माबलम्बी भक्तजनहरुले यी नौ दिनमा आफ्नो घरमा घटस्थापना गरी अखण्ड ज्योति स्थापना गरेर नौ दिनको उपवास राख्छन् । २४ गते बिहान ७ बजेर १५ मिनेटमा घटस्थापनासहित जमरा राख्ने साइत छ । असोज २८ गते आइतबार पचली भैरव यात्रा परेको छ । यसैगरी असोज ३० गते मङ्गलबार फूलपाती भित्र्याइने छ ।
त्यसैदिन बिहान ९ बजेर २१ मिनेटमा तुलजा भवानीको यात्रा गराइन्छ । १० बजेर २ मिनेटमा भवानीलाई स्थिर आसनमा राखिन्छ । असोज ३१ गते बुधबार महाअष्टमी, कात्तिक १ गते बिहीबार महानवमी, कात्तिक २ गते शुक्रबार विजयादशमी अर्थात् दशैँको टीका परेको छ ।
विजयादशमीका दिन बिहान ९ बजेर ३९ मिनेटमा देवी विसर्जनको साइत निस्किएको छ । देवीको प्रसाद लगाउन साइत खोज्नेका लागि बिहान ९ बजेर ५१ मिनेटको साइत दिइएको अध्यक्ष प्रा डा गौतमले बताउनुभयो ।
विजयादशमीकै दिन बिहान ८स्३५ मा तुलजा भवानीको यात्रा गराइन्छ । भवानीलाई बिहान ९ बजेर ४४ मिनेटमा स्थिर आसनमा राखिन्छ । कात्तिक ६ गते मङ्गलबार सबै बलि पूर्ति गरी जमरा सेलाइन्छ । कात्तिक ७ गते बुधबार कोजाग्रत पूर्णिमा व्रत मनाएपछि नेपालीको महान् चाड बडादशैँ समापन हुनेछ ।
आश्विन शुक्ल प्रतिपदाको दिनलाई घटस्थापना भनिन्छ । यो नवरात्रको पहिलो दिन हो । यस दिन विधिपूर्वक भगवतीको आवाहन गरेर घटस्थापना गरिन्छ । यही घटस्थापनासँगै भगवतीको उपासना गरी दुर्गा भगवतीको प्रिय जौको जमरा राख्ने शास्त्रीय विधान छ । संस्कृतमा जमरालाई जयन्ती भनिन्छ । जयन्ती भगवतीकै एक नाम पनि हो ।
यसरी स्थापना गरिएका जौ क्रमशः बढ्दै जमराका रूपमा परिणत हुन्छन् । जमरा जति राम्रा हुन्छन् त्यति भगवती प्रशन्न हुनुहुन्छ भन्ने धार्मिक मान्यता रहेको छ । जौको अङ्कुर दुर्गादेवीको प्रिय वस्तु भएकाले जौ रोपण गरी दुर्गालाई चढाएर विजयादशमीको दिन टीका प्रसादसँगै समृद्धिको प्रतीक पहेँलो जमरा ग्रहण गरिन्छ । घटस्थापनाको साइत बिहान ९ बजेर ४१ मिनेटमा शुभ रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ । उक्त समय वाहेक अन्य शुभ समयमा पनि घटस्थापना गर्न सकिन्छ । कलशमै सम्पूर्ण देवीदेवता सप्तसागर, सप्तद्वीप, सम्पूर्ण नदी एवं तीर्थहरू निहित हुन्छन् भन्ने कुरा कल्ली पुराणमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तो छ एकादशीको महत्व ,के गर्ने एकादशीमा ?
वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले अष्टमी, पूर्णिमा र औँसीजस्ता तिथिलाई बढी महत्त्व दिने गरेको पाइन्छ। वैष्णव […]
अमेरिकामा तीन दिने गीता आध्यात्मिक सम्मेलन
बोस्टन । तीन दिने गीता आध्यात्मिक सम्मेलन – २०१९ ओहायो राज्यको कोलम्बसमा आइतबार सम्पन्न भएको छ। विश्व भूटानी […]